IJalimane, i-France kanye ne-Italy isimise ukukhishwa komuthi wokugoma | Scrolla Izindaba
IJalimane, i-France kanye ne-Italy isimise ukukhishwa komuthi wokugoma
IJalimane, i-France kanye ne-Italy – okungamazwe amathathu amakhulu eYurophu – aphakathi kwamazwe amaningi amise ukukhishwa komuthi wokugoma i-AstraZeneca ngenxa yemibiko yamahlule egazi adalwe yilomjovo.
Njengoba umbono wamazwe omhlaba uqhubeka ukhula njalo ngokumelene nalo muthi wokugoma, i-World Health Organisation (WHO) isinxuse ukuthi kwehliswe umoya, yaphinde yakhumbuza ohulumeni ukuthi abukho ubufakazi okwamanje bokuthi lo mjovo ubangela amahlule egazi kwabanye abantu asebegomile.
I-Denmark kanye ne-Norway babike ngesonto eledlule ukuthi abantu abaningi abathole umthamo wabo wokuqala we-AstraZeneca babike ngezigameko zokopha, amahlule egazi kanye nesibalo esiphansi segazi.
Amahlule egazi angadala ukuthi igazi lingakwazi ukuhamba lize lifinyelele ezithweni zomzimba, okungaba yingozi empilweni yomuntu ngoba kungathinta amazinga e-oksijini emaphashini futhi kudale ukulimala kumaphaphu.
Ezinsukwini ezilandele le mibiko, i-Ireland kanye neNetherlands bamemezele ukuthi bazoyeka ukukhipha umuthi wokugoma kuze kuqinisekiswe ukuthi uphephile.
Abaholi base-France nabase-Italy nabo bachaze isinqumo sabo njengezinyathelo zokuzivikela.
U-Emmanuel Macron, umengameli wase-France, uthe isinqumo abasithathile senziwe “ngenxa yokuqapha… nethemba lokuthi singaqhubeka ngokushesha uma i-EMA [European Medicines Agency] isiqinisekisa ukuthi sesingakwazi ukukhipha umuthi wokugoma” emhlanganweni obuhlelelwe uLwesibili ntambama.
Khonamanjalo, isiphathimandla sezemithi e-Italy, i-Aifa, sithe naso simisa ukukhishwa komuthi wokugoma “njengendlela yokuqapha neyesikhashana” ngaphambi kwesinqumo se-EMA.
Ochwepheshe abaningi basigxekile lesi sinqumo sikahulumeni, bethi ekugcineni kuzobulala kakhulu ukubamba umuthi wokugoma, nokuthi akukho ukuxhumana phakathi komuthi wokugoma i-AstraZeneca namahlule egazi.
UDavid Spiegelhalter, ongusihlalo we-Winton Center for Risk and Evidence Communication e-Cambridge, uphikise ngokuthi akukaze kube khona ukwanda okungajwayelekile kwezimo eziphathelene negazi eYurophu.
USpiegelhalter ubhale ku-The Guardian ukuthi, “ezimweni zamanje kudingeka sicabange ngonyawo lonwabu nangokushesha, futhi simelane nokungahambi sikholwa izinto okungenzeka ukuthi azikho.”
INingizimu Afrika yamisa ukukhishwa kwayo komuthi wokugoma i-AstraZeneca mhla ziyi-8 kuNhlolanja ngesizathu esingahlobene nalokhu – kodwa ngenxa yezinga eliphansi lokusebenza kwawo ekuvimbeleni ukubhebhetheka kwegciwane.
Umthombo Wezithombe: @AJENews